Umatshini wokukhawulela umatshini osika i-Laser oSebenzayo kunye noMthengisi | Guo Hong
Zenzekelayo ityhubhu laser ukusika umatshini kukusebenza okuphezulu, ukusebenza ngokuchanekileyo nangokuthembekileyo izixhobo zokusika ezidibanisa ulawulo lwekhompyuter, ukuhanjiswa ngokuchanekileyo komatshini, kunye nokusika okufudumeleyo. Ujongano lomntu olungileyo lomatshini lwenza ukuba umsebenzi ube lula ngakumbi kwaye ube lula, kwaye unokusika iindawo ezingenanto ngokukhawuleza nangokuchanekileyo. Yamkela uyilo lweemodyuli ezikwisiqwenga esinye, ekhawulezayo ukufaka kwaye kulula ukuhamba.
Zenzekelayo umatshini ityhubhu laser ukusika umatshini
Ukuzenzekelayo okupheleleyo, Ixabiso lezeMisebenzi elingaphantsi
Kulula ukusebenza, ukhuseleko olomeleleyo, ukusebenza okuzinzileyo nokuthembekileyo.
Iingcali zoMoya eziBini eziPhezulu
Ukusebenza okuphezulu: cofa iqhosha lokucofa, ukugxila okuzenzekelayo, amaxesha ama-3 ngokukhawuleza kunombane wombane; Ukuchaneka okuphezulu: amandla amakhulu kunye nokuxinana okungapheliyo, akukho kukhululeka kwetyhubhu, ukusika ukuchaneka okuqinisekisiweyo;
Uzinzo High: ezizodwa inkxaso ityhubhu ukuthintela ityhubhu ekwakheni deformation, echanekileyo ixesha elide;
Qaphela ukwahlulwa kwezinto ezikrelekrele, ukondla kunye nokungena ngaphandle komthungo ngomatshini wokusika wefayibha emva kokuba zonke iityhubhu zibekwe kwisixhobo sokondla, kwaye uqinisekise ukuba ityhubhu enye inikezelwa kwingalo ehambisa ixesha ngalinye.
Imveliso egqityiweyo ilahliwe ngokuzenzekelayo emgqomeni wokugcina, inkxaso-kabini yokuxhasa inkxaso kwimibhobho engaphezulu.
Umzekelo womatshini GHJG-F6020T
1.Ungasika imigca kunye nemingxunya enobubanzi obahlukeneyo obuvela kumacala ahlukeneyo kumbhobho, kwaye uhlangabeze imeko yokuhlangana kwe-centrifugal kunye ne-non-centrifugal yesebe kunye ne-axis ephambili yombhobho.
2.Ungasika iikholamu eziNqamlezileyo ekupheleni kombhobho wesebe, kwaye uhlangane kwimeko ye-centrifugal kunye ne-non-centrifugal yokuma kwendlela yesebe kunye ne-axis ephambili yombhobho.
3.Ungasika icandelo elithobekileyo kwicandelo lokugqibela lombhobho.
4. Ngaba unqumle umbhobho wesebe odibene nombhobho oyintloko wesetyhula.
5.Ngaba usike umphezulu engile Wotho
6.Ngaba usike isikwere umngxuma, imingxunya esinqeni ezimilise kunye umngxunya setyhula kumbhobho.
8.Ngaba usike zonke iintlobo zemizobo phezu kombhobho wesikwere.
Egqithileyo Umatshini wokusika i-Tube Fibre Laser
Okulandelayo: Laser Welding Machine Welding ngesandla
2kw ifayibha laser ukusika umatshini
umatshini wokusika umbhobho ngokuzenzekelayo
oluzenzekelayo ityhubhu laser ukusika umatshini
I-cnc laser ukusika ixabiso lomatshini
I-cnc ipayipi yokusika umatshini wokusika
Ifayibha laser izixhobo zokusika
ifayibha optic laser ukusika umatshini
ifayibha optic ityhubhu mgawuli
ityhubhu yentsimbi yokusika umatshini wokusika
isikwere ityhubhu yokusika umatshini